Fanafihana tanana :: Mitantara ny fampijaliana nataon’ireo jiolahy azy ireo olona voatafika • AoRaha
Fanafihana tanana Mitantara ny fampijaliana nataon’ireo jiolahy azy ireo olona voatafika
Kaominina akaiky an’Antananarivo saingy lasibatry ny asan-jiolahy matetika Ambohimalaza. Iray volana lasa, notafihin’ireo olon-dratsy ny tananan’I Betoho. Fotoana fohy taorian’izany nasesin’izy ireo norobaina ny tananan’Ambohimarina Andrefana, Soanarivo ao amin’ny kaomininan’I Fieferana ary Andranosoa. Zava-maranitra sy vato no nentin’ireo jiolahy nanafika ny tanàna. Basy kilalao no nasehony nampihorohoro an’ireo nahasahy nanohitra. Mitantara ny fampijaliana nihatra tamin’izy ireo ny mponina any amin’ireo tanana ireo.
Mandry tsy lavo loha ireo mponina any amin’ireo kaominina maro amin’ny distrikan’Antananarivo Avaradrano. Iray volana lasa, notafihin’ny jiolahy ny tanànan’i Betoho, kaominina Ambohimalaza ao amin’ity distrikan’Antananarivo Avaradrano. Fotoana fohy indray, nasesin’ireo jiolahy norobainy ny tanànan’Ambohimarina Andrefana sy Soanarivo, kaominin’i Fieferana ary Andranosoa, kaomin’Ambohimalaza izay samy ao anatin’ny distrikan’Antananarivo Avaradrano avokoa, ny alarobia hifoha ny alakamisy 10 okotobra 2019, tokony tamin’ny iraika ambin’ny folo sy sasany alina. Vola an-tapitrisany sy entam-barotra no voaroba tao amin’ny fokontanin’Ambohimarina Andrefana sy Soanarivo. Vola vidin’omby kosa no lasan’ireo olon-dratsy tao amin’ny fokontanin’Andranosoa – Ambohimalaza. Milaza ny mbola hiverina hanafika izy ireo ato ho ato.
Fitaintainana lava, horohoro no iainan’ireo mponina vokatr’ izany. Misy amin’izy ireny aza no mitondra takaitra mihitsy vokatry ny daroka sy vono atao aminy. Ho an’ireo tsy mahazaka izany dia mamoy ny ainy tsy fidiny. Mitantara ny fomba fampijaliana ataon’ireo jiolahy ny sasany amin’ireo mponina avy any amin’ireo tanàna nolalovany.
Niaina toy ny fiainany an-davanandro ireo mponina ao amin’ ny fokontanin’Ambohimarina Andrefana sy Soanarivo, kaomin’i Fieferana ny tontolo andron’ny alarobia 9 oktobra. Notorahan’ireo jiolahy ny vato ny tafon-trano narahana famakiana ny varavaram-be. “Tsy nisy niomanana fa tonga dia daroka tamin’ny “barre à pince”no nataony tamiko. Nosesehany akondro ny vavako mba tsy hahafahana miantso vonjy. Sady manontany izy ireo hoe aiza ny vola ? Norovitiny ny lambam-pandriana namatorany anay mianakavy tsy hihetsika”, hoy Ralaitsimba Joseph, izay mbola hita eny amin’ny tarehiny ny mangana tamin’ny daroka nahazo azy.
Maherin’ny folo tapitrisa ariary no vola azony tao amin’ny tokontrano iray izay mpitahiry ny volan’ny fikambanan’ny tantsaha tao amin’ ny fokontanin’Ambohimarina Andrefana.
Vola efatra tapitrisa ariary niampy ny entam-barotra tao amin’ny toeram-pivarotana iray kosa no tao amin’ny fokontanin’i Soanarivo. “Nariany eran’ny làlana ny tavoahangin’ny zava-pisotro tsy lanin-dry zalahy. Nisy “sardine” tsy mbola nisokatra no
notsiponinay tao anaty alana kininina tao”, hoy hatrany Joseph, mitantara ny ampitson’ny fanafihana.
Eo atsimo ny tanànan’Ambohimarina Andrefana sy Soanarivo, kaomin’i Fieferana no misy ny tanànan’Andranosoa, kaominina Ambohimalaza. “Niantso an-telefaonina anay tety ry zareo teny Soanarivo fa misy manafika. Tapitra nandositra any anaty ala ny olona fa tsy nisy nahasahy nanohitra. Nisy niteny tamin’ireo jiolahy fa hanafika anay ety Andranosoa ry zareo. Misy fianakavianay mipetraka mantsy eny Ambohimarina Andrefana sy Soanarivo ka ireo no nampitandrina anay”, hoy Rabenarivo Gabriel, monina ao Andranosoa.
Nanidy bokotra pataloha
Nivoaka ny trano ny olona sasany nitazana ny tanànan’Ambohimarina Andrefana sy Soanarivo izay tsy mifanalavitra amin’ny fokontanin’Andranosoa. “Niteny ny vadiko aho hanidy ny trano. Sady manidy ny bokotra patalohako aho no mandaka ny varavarana hivoaka ny trano. Hay ry zalahy efa eo an-tokotany miandry ahy fotsiny” hoy Rakotondramanana Jéremia, mitantara ny fanafihana nihatra taminy.
Nobatain’ny roa lahy teo amin’ ny tànany havia sy havanany i Jéremia hiverina hiditra tao tranony. Ny jiolahy iray mitana “barre à pince” teny an-tànany sady manontany ny vola vidin’omby. Ny jiolahy iray mitsilailay miara-matory miaraka amin’ny vady aman-janak’i Jéremia eny ambony fandriana. Nahohony teo an-tongo-pandriana i Jéremia tsy avelany hijery ny salovan-tavan’ireo jiolahy. “Raha tsy nahay niala aho dia nizara roa ny lohako tamin’ilay novelesiny tamin’ny “barre à pince vao tafiditry ny trano ry zalahy. Ny soroko sy ny masoko no mangana tamin’ny daroka. Nanontaniany ny olona mpanambola be eto an-tanàna”, hoy Rakotondramanana Jéremia izay gaga tamin’ny fahalalan’ireo jiolahy dieny mialoha ny fisian’ny vola vidin’omby tao aminy.
Raikitra ny ady
Sambany no nisy nanafika ny tanànan’Andranosoa raha ny filazan’ ny renin’i Jéremia. Nentin’ireo jiolahy nivoaka ny trano, Rakotondramanana Jéremia rehefa azony izay notadiaviny. Nisy jiolahy nifampitoraka vato tamin’ny anadahin-drenin’ i Jéremia izay mifanila amin’ny tranony, tamin’izy ireo nivoaka ny trano. “Nomeko ny daka faran’izay aiko ilay nitondra “barre à pince” tao afarako vao tonga teo an-tokotany. Nifamely totohondry tamiko teo an-tokotany izy roa lahy nitazona ahy. Rehefa hitany fa tsy nahatohitra ahy ireo dia nitsoaka niverina tamin’ny làlana nidirany izy vao hanafika”, hoy hatrany i Jéremia, izay manana ahiahy fa nisy olona eo an-tanàna no mitarika sy manondro ny làlana haleha ary ny olona manam-bola eo an-tanàny.
Vita lamina ny fanafihan’ireo jiolahy ny fokontany telo ao anatin’ ny iray alina. Tsy sarotra tamin’ireo olon-dratsy ny trano hidirana sy manana vola ary mpivarotra enta-madinika. “Tsy niova làlana ireo olon-dratsy fa ny làlana niditra nanafika ihany no làlana nivoahany ny tanàna. Noho izany niandriandry tany ambadika tany ny olona nanondro ny trano hotafihina”, hoy Rakotondramanana Jéremia, maminavina fa olona eo an-tanàna ihany no manome ny mombamomba ny toe-bola miditra isan-tokantrano.
Tsy lavitra ny naman’ireo jiolahy fa olona eo an-tanàna ihany. “Raha vahiny no miditra eto amin’ ny andro antoandro na alina fa tsy hifandrenesana ny vovon’ireo alika. Tsy nisy nivovo na iray ireo alika fa nangina tanteraka. Efa lasa ireo olon- dratsy vao naneno ny lakolosim-piangonana. Nivoaka ny trano daholo ny olona fa tsy nisy tratra ireo olon-dratsy. Antsasak’adiny taty aoriana vao tonga ny mpitandro ny filaminana”, hoy hatrany i Jéremia, izay nanoso-kevitra ny tokony hanaovan’ ny mpitandro ny filaminana fisafoana ny tanàna izay eo ambany fiadidiany mba tsy hanahirana azy ireo ny toerana haleha raha sendra misy fiantsoana amin’ny fanafihan’ny
Mba ho fisorohana ny mety mbola hiverenan’ireo jiolahy ny tanànan’Ambohimarina Andrefana sy Soanarivo ary Andranosoa no nanovàna ny anaran’ireo olona nanaiky niresaka.
Famongorana ny fanendahana Telo amby roapolo lahy nosamborina teny Antaninarenina
Halatr’omby Dahalo telo maty voatifitra tany Ambovombe
Firaisana tsikombakomba Mpivady voarohirohy niaraka tamin’ny jiolahy
Fahamaizana :: Vehivavy lehibe 88 taona avotra tao anaty trano nirehitra
Fisavana fiara :: Sarona ny vola sandoka roapolo tapitrisa ariary